စစ်တပ်နဲ့ ရဲ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၄၀ ကျော်ပြီ - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
စစ်တပ်နဲ့ ရဲ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၄၀ ကျော်ပြီ
Army officers intervene duringaprotest against the military coup in Yangon, Myanmar, March 2, 2021. Picture taken from behindawindow. REUTERS/Stringer
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို စစ်တပ်နဲ့ရဲက အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲတာကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ ဒီကနေ့အထိဆိုရင် ၂၄၀ ကျော်သွားပါပြီ။
ဒီကနေ့ ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းက တာမွေ၊ လှိုင်၊ သာကေတနဲ့ တောင်ဥက္ကလာတို့မှာ တစ်ဦးစီ သေဆုံးပါတယ်။ ပခုက္ကူမှာ မနေ့ညက ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ ဒေါ်မာလာဝင်းရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို မိသားစုက ဒီကနေ့ပြန်ရခဲ့ပြီး မုဒုံနဲ့ ပေါင်မှာတော့ မနေ့ညက ၁ ဦးစီးသေဆုံးပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (AAPP) က မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့အထိ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ သေဆုံးသူအရေအတွက် ၂၃၅ ယောက်ရှိတဲ့အတွက် အခုထပ်တိုးတာနဲ့ဆိုရင် အယောက် ၂၄၀ ကျော်ထိရှိသွားတာပါ။
နေပြည်တော်က ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲကို မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ၊ အသံဗုံးတွေပစ်ပြီး ဖြိုခွဲတာကြောင့် ဆန္ဒပြသူတွေ ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ (NAT SOUND
ရန်ကုန်မှာလည်း ဒီကနေ့ ဆန္ဒပြပွဲတချို့ကြိုကြားဆိုသလို ရှိခဲ့ပေမယ့် အဓိကအခြေအနေကတော့ စစ်တပ်နဲ့ရဲက အတားအဆီးတွေကို လိုက်ရှင်းရင်း ပစ်ခတ်တာ၊ တွေ့တဲ့လူကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာ၊ ရပ်ထားတဲ့ကားတွေကို ဘူဒိုဇာနဲ့ အကြောင်းမဲ့တိုက်ပြီး ဖျက်ဆီးတာ စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်၊ ကျောက်မြောင်းဘက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာကို မျက်မြင်တွေ့သူက ရိုက်ယူထားတဲ့ ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရပြီး ပျက်စီးသွားတဲ့ ကားပိုင်ရှင်ကို လှမ်းမေးထားတာပါ။ အတားအဆီးတွေကို ဘူဒိုဇာကားကြီးနဲ့ ထိုးရှင်းတာမှာ အိမ်တအိမ်ထဲထိ ဝင်လုနီးဖြစ်တာကိုလည်း ဗီဒီယိုတခုမှာတွေ့ရပါတယ်။
စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေက ဆိုင်တွေကိုဖျက်ဆီးတာ၊ စားစရာနဲ့ ပစ္စည်းတွေယူတာ၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ် စတာတွေကို ရိုက်နှက် ကန်ကျောက် ဖျက်ဆီးတာ၊ နေ့နေ့ညည ဆဲဆို အော်ဟစ် ကြိမ်းမောင်းတာတွေကိုလည်း ဗီဒီယိုတွေထဲမှာ တွေ့ရပါတယ်။ တနေရာမှာဆိုရင် လမ်းပေါ်တွေ့တဲ့လူတယောက်ကို ရဲက ဆွဲခေါ်လာပြီး တောင်းပန်နေတဲ့ကြားကပဲ ရိုက်နှက်ပြီးတော့ လမ်းပေါ်မှာ လေးဘက်ထောက်သွားခိုင်းသလို နောက်ကနေ ဆောင့်ကန်တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
မန္တလေး၊ ပဲခူး၊ ကယား၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေး၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ကရင်၊ တနင်္သာရီ စတဲ့ ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေထဲက မြို့တွေမှာ ဒီကနေ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေရှိခဲ့ပြီး အပြင်းအထန် ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲတဲ့သတင်းတော့ အခုချိန်ထိ မရသေးပါဘူး။
CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါတဲ့ မန္တလေးက မီးရထားဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်ပြန်မဝင်ရင် လိုင်းခန်းကဆင်းဖို့ စစ်ကောင်စီကပြောတာမှာ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး ဒီကနေ့ လိုင်းခန်းကနေ ရွှေ့ပြောင်းသွားကြပြီးတော့ မြို့ခံလူထုက ဝိုင်းကူညီပေးကြပါတယ်။
တနိုင်ငံလုံးမှာ အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေးကို လျှော့ချ ဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့် လူထုရဲ့ နိစ္စဓူဝကိစ္စတွေမှာ အခက်အခဲတွေကြုံနေကြရပါတယ်။